कोभिड महामारीले पनि छेकेन महिला र बालबालिका बेचबिखन! – PathivaraOnline
Home > समाचार > कोभिड महामारीले पनि छेकेन महिला र बालबालिका बेचबिखन!
admin September 5, 2020 समाचार, समाज	0
काठमाडौँ – शनिबार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको १४ औँ राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीकै बीचमा पनि मानव बेचबिखन र ओसारपसार रोकिन नसकेका बेला दिवस मनाउन लागिएको छ ।
स्रोत नखुलेको २० लाख रुपैयाँ नगद बोकेर कहाँ जादैथिए यिनीहरू?
चितवनमा आजको दुर्घटनामा बाबुछोरा सहित ४ जनाको यस्तो दुःखद निधन !